Iko iyo Dual SIM yeiyo nyowani iPhone XS uye XS Max inoshanda | IPhone nhau
Mashandiro anoita iyo Dual SIM yeiyo nyowani iPhone XS uye XS Max inoshanda
louis padilla | | iPhone Xs, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Icho chimwe chezvinhu zvikuru zvitsva zveiyo iPhone XS uye XS Max. Pakupedzisira, mushure memakore mazhinji nerunyerekupe nezvazvo, Apple yatanga iPhone yayo neiyo Dual SIM sarudzoKunyangwe ichizviita neimwe nzira kupfuura mamwe mabhureki, uye pachinzvimbo chetrayiti mbiri yekuisa makadhi maviri, inongovhenekera kadhi rekunyama chete (nanoSIM senguva dzose) uye eSIM.
Chii chinonzi eSIM? Tingava sei nenhamba mbiri pafoni yedu? Tingaenda sei kubva kunhamba kuenda kune imwe? Ndeapi mabasa atinogona kushandisa nenhamba yega yega? Tinokupa iwe zvese zvese zvaunoda kuti uzive pazasi.
1 Chii chinonzi eSIM?
2 Zvakanakira eSIM
3 Iyo iPhone Dual SIM
4 Chii chandinoda kushandisa eSIM pane iPhone
5 Kubva panhamba ipi yandichafonera
6 Ndigogamuchira sei mafoni?
7 Ko zvakadii nharembozha?
8 Ndinoona sei kufukidzwa kuripo?
9 Zvakare iyo iPhone XR
Chii chinonzi eSIM?
Isu tese tinoziva iyo SIM kadhi yenharembozha yedu, iyo yakadzikiswa muhukuru kusvika kune ano maNanoSIMs ayo anenge ese mafoni emumusika pamusika atove nawo. Mukuyedza kuwedzera kudzikisa saizi yemidziyo, iyo indasitiri yaita kusvetuka kune eSIM, chinova chinhu chinopfuura iyo SIM chip isina zvimwe zvishongo uye inotengeswa pane iyo terminal, pasina mukana wekuchinja. Izvi zvinoderedza zvakanyanya nzvimbo inogarwa nekusada tray kana Pius kuti uverenge chip, nekuti zvese zvakabatanidzwa muchigadzirwa.
Idzi iPhone hadzisi mafoni ekutanga kuve neEIM, sezvazvinowanzoitika, asi sezvo vainayo, tine chokwadi chekunzwa zvakawanda pamusoro peiyi tekinoroji uye vanoshanda vachasvetuka kuti vazvigadzirire, nekuti kusvika zvino chaive chinhu chakapotsa anecdotal inogumira kune akati wandei anoenderana zvishandiso. Muchokwadi, Vodafone neOrange vakatove vazivisa kuenderana muSpain uye kune dzimwe nyika vazhinji vashandisi vatorawo nhanho inoenda kune ino tekinoroji.
Kunze kwekudzora saizi uye kubvisa zvinofamba mukati meiyo smartphone, izvo zvinogara zvakanaka kune kuomarara kwechigadzirwa, eSIM ine zvimwe zvakawanda zvakanaka, kusanganisira mukana wekuchinja kubva pane imwe nhamba kuenda kune imwe pasina chikonzero chekubvisa chero kadhi, chete kubva kumagadzirirwo echigadzirwa chedu. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuve nemitsara yakati wandei yakagadzirirwa mune yako terminal uye shandisa iyo inonyatsokodzera iwe mune ese kesi nekuti kuchinja kubva kune imwe kuenda kune imwe inyaya yemasekondi.
Mikana inopihwa zvakare, sezvo iwe usingade iyo SIM kadhi kubva kune yako nyowani opareta, uye shanduko dzinogona kuitika ipapo, pasina kugara maawa akati wandei (kana mazuva) usina foni nekuti tambo nyowani haisati yashandiswa. Iyi ingori mienzaniso miviri yeakawanda atingaise, nekuti eSIM inongova nezvakanakira mushandisi, uye pakupedzisira zvinoita sekunge iri kugara.
Iyo iPhone Dual SIM
Apple yakaratidza iPhone yayo nyowani, uye imwe yenyaya dzayo dzaive chaizvo izvi. Kusvika parizvino mafoni ane Dual SIM aive nematray maviri (kana zvakapetwa) kuisa makadhi maviri epanyama. Mimwe inobvumidza iwe kuti ushandise mitsara miviri yezwi, vamwe imwe chete yezwi uye imwe yedata, kana tambo imwe chete uchifanira kushandura manyore kubva kune imwe uchienda kune imwe. Apple yakasarudza chete nanoSIM yemuviri, ine yayo yakajairika tireyi, uye eSIM. Kana iwe usiri kuronga kushandisa eSIM, iwe hauzo cherechedze chero chinhu chitsva, nekuti zvese zvakangoita sepakutanga.
Chii chaungaite nekuda kwechinhu chitsva ichi? Unogona kuve nemitsetse miviri yefoni pane yako iPhone, imwe yekufonera wega uye imwe yekufonera kubasa. Kurota kwevakawanda kunozadzikiswa uye havachafanirwe kutakura nhare mbiri zvakare. Kana iwe unogona kuve netambo imwe yezwi uye imwe yedata, uchitora mukana weakanakisa mitengo pamusika kana iyo inopa iyo yakawanda Gigas yedata. Iwe hauchazosungirwa kune inodhura izwi reti nekuti inokupa yakawanda data yekushandisa. Kana iwe unogona kuchinjira kuzita remunharaunda kana dhata rate kana iwe uchienda kunze kwenyika, pasina kusiya yako yakajairwa nhamba.
Chii chandinoda kushandisa eSIM pane iPhone
Chinhu chekutanga chauchazoda ndechekuti, kuwedzera kune yako iPhone XS kana XS Max, ndeyekuti wako anoshanda anoenderana. Parizvino kuSpain, chete Vodafone neOrange ndizvo, kana zvirinani, zvichave nekuti haugone kubvumirana nechigadzirwa ichi parizvino. Iyi sevhisi yeSIM ine mutengo uyo unosiyana zvichienderana nezinga rawabata, asi muchidimbu tinogona kutaura kuti mitengo inodhura kwazvo inosanganisira yemahara eSIM nhamba, uye mimwe mitero ine mutengo we € 5.
Parizvino hazviite kontrakiti chete eSIM, iwe unofanirwa kuve ne "yakajairika" mutsetse neSim yako yemuviri, uye izvo zvaunowana mimwe mitsara ine eSIM uchishandisa iyo imwecheteyo nhamba iyo iwe yaunogona kumisikidza pane ako madhivha. Kuti iwe unzwisise, kana iwe uchida kushandisa yako mutsara webasa pane yako wega iPhone, iwe unofanirwa kuhaya eSIM mune mutsara webasa, siya iyo SIM kumba uye gadzirisa iyo eSIM pane yako iPhone, iyo ichave iine yega SIM yakaiswa mune yayo tireyi.
Pamusoro peizvi, iwe unozoda mushandisi wako kunyorera kuisirwa pane yako iPhone, kana QR kodhi iyo iyo yako opareta inokupa iwe. Enda ku "Zvirongwa> Nharembozha dhata> Wedzera nharembozha data" uye tarisa iyo QR kodhi iyo yaunopihwa iwe nemupi wako. Kuti uite iyo, zvingave zvakafanira kuvhura yako oparesheni mushandisi pane yako iPhone. Nenzira iyi iwe unogona kuwedzera akawanda marongero sezvaunoda kuburikidza neSIM, asi iwe unogona chete kushandisa imwe yacho, uchifanira kuchinja manyore kune imwe kubva kune mamwe marongero aya.
Se nhanho yekupedzisira iwe unofanirwa kutumidza mutsara wega wega kuti ugone kuvaziva nguva imwe neimwe yaunoda kuchinja, uye sarudza izvo zvaunoda kuti yako yekumusoro mutsara ive uye kuti ndeipi yekushandisa iwe yaunoda kupa iyo imwe tambo. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti ese ari maviri mafoni mitsara anokwanisa kugamuchira uye kufona, SMS uye MMS, panguva imwe chete, asi imwe chete yadzo inogona kushandiswa sedata network. Saka sarudzo iyo Apple inokupa ndeiyi:
Shandisa tambo imwe seyekutanga network neese mashandiro uye yechipiri network chete yefoni neSMS
Shandisa tambo imwe seyakakura network yekufona neSMS uye imwe yacho chete sewe data network.
Kubva panhamba ipi yandichafonera
Kufunga kuti wagadzirisa mitsara miviri yekufona neSMS, kubva panhamba ipi yaunofona? Iwe haufanire kuchinja mitsara yega yega kana matatu, kubvira paunosheedza munhu waunobata iwe unogara uchishandisa mutsetse wawakapedzisira kushandisa neuyo kusangana. Kana usati wamboidaidza, inoshandisa mutsetse wawakagadzirisa sewewe network huru.
Iwe unogona kushandura iyo nhamba kubva kwaunoda kuvafonera kune yega yega kuonana, kana kubva kunhare yekushandisa pachayo unogona kusarudza rakasiyana mutsara pane iro rinoshandiswa nekutadza. Iwe unogona zvakare kuzviita kubva kuMessage application kutumira meseji kubva kune imwe nhamba kunze kweiyo yakasarudzwa neiyo iPhone nekutadza.
Munyaya ye iMessage uye FaceTime, haugone kushandisa mitsara miviri panguva imwe chete, saka kubva kumagadzirirwo emidziyo unofanirwa kusarudza kuti ndeipi yaunoda kushandisa neaya masevhisi eApple kana iwe usiri kuda kuchengeta iyo yakasarudzwa nekutadza
Ndigogamuchira sei mafoni?
Kana iwe wakagadzira mitsara miviri yekufona, iwe unozokwanisa kuigamuchira pane imwe yenhamba mbiri pasina kuita chero chinhu, haufanire kuchinja kubva kune imwe uchienda kune imwe. Ehezve, kana iwe uri kutora mutsetse nekufona uye ivo vanokudana iwe kune imwe mutsara, ichaenda yakananga ku voicemail, asi hauzoziviswa nezve chero nhare dzakarasikirwa panhamba yechipiri iyoyo, ruzivo rwaunofanira kufunga nezvaro.
Ko zvakadii nharembozha?
Iwe unogona chete kushandisa imwe nharembozha yedatha kunyangwe kana mitsara miviri yawakagadzirisa unayo. Kana iwe uchida kushandura mutsetse urikushandisa we data mbozha, unogona kuenda ku "Zvirongwa> Nharembozha data" uye sarudza iyo nhamba yaunoda kushandisa pane ino basa. Izvo zvakafanana kana iwe uchida kumisikidza chero sarudzo mukati megadziriro yezvishandiso. Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti kana iwe uri kugamuchira kufona pane iyo nhamba isina nharembozha inoshanda, yako iPhone haizove neinternet panguva iyoyo yekufona, nekuti imwe nhamba ichave "yakadzimwa" panguva iyoyo.
Ndinoona sei kufukidzwa kuripo?
Kana iwe ukatarisa mifananidzo iri muchinyorwa uno uchaona kuti kurudyi, kumusoro, kufukidzwa kunoonekwa nemifananidzo miviri: iyo yekumusoro yekukwira bha uye mutsetse une machira pazasi. Neiyi nzira iwe uchazoziva kufukidzwa kweiyo yega yeiri mitsara. Kana iwe uchida kuona rumwe ruzivo, unogona kuratidza iyo Center Center uye kumusoro kuruboshwe iwe uchaona mabhaidhi ekuputira ane zita revashandisi vaviri vauri kushandisa, kunyangwe iwo akafanana.
Zvakare iyo iPhone XR
Iyo iPhone XR, iyo inodhura kwazvo modhi yakatangwa naApple asi izvo zvinotora nguva yakati rebei kusvika, Iwe zvakare une mukana uyu kushandisa Dual SIM kuburikidza neSIM. Isu tinofungidzira kuti oparesheni ichave yakafanana, asi gwaro iri rakavakirwa pane ruzivo kubva kuApple uye rinongoreva iyo XS uye XS Max, saka isu tichamirira rumwe ruzivo tisati tasanganisira iyo XR mune ino chinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Xs » Mashandiro anoita iyo Dual SIM yeiyo nyowani iPhone XS uye XS Max inoshanda
Ini ndinofungidzira kuti painoti "Odds inopihwawo" zvinoreva "kutakurika" handiti?
Gonzalo mutsipa akadaro
Rondedzero ndeyekuti, chii chichaitika kana mumitsetse miviri ini ndoda kushandisa WhatsApp?
Pindura Gonzalo Cuello
Kune iyo WhatsApp ichafanirwa kuvandudzwa uye kubvumira manhamba maviri mune imwecheteyo app
Juan A Diaz akadaro
Inogona here mamiriro anogona kuremedzwa pane imwe nguva kuitira kuti usatambire mafoni panguva yakatarwa?
Pindura Juan A. Diaz
Iyi iApple yemaminitsi maviri epfupiso vhidhiyo yeKeynote
Ndeupi mutsauko uripo pakati pe iPhone XS ne iPhone XR